VLC waa mid ka mid ah ciyaaryahan warbaahinta ugu caansan oo faa'iido weyn waxaa ka mid ah waa in ay u furan yahay il software. Horumarinta sii si joogto ah la xariirta si ay u sii fiican. Halkan waxa ku yaala dhawr talo si aad u leeyihiin in ay ogaadaan oo ku saabsan VLC u macruufka .
Degsado iyo ku rakibidda VLC qalabka macruufka ah
Waxaad kala soo bixi kartaa oo gashato oo laga helay ilo kala duwan. Halkan waxa ku jira ilo lagu kalsoonaan karo oo inta badan loogu soo degsado software saddex:
Waa goobta rasmiga ah ee ciyaaryahan warbaahinta VLC. Waa isha ugu kalsoonaan karo u soo degsado VLC ee macruufka qalabka aad
2. Lugood Store- https://itunes.apple.com/in/app/vlc-for-ios/id650377962?mt=8
Waa meel kale oo lagu kalsoon yahay u duuban VLC. Waxaad si toos ah u tegi kartaa Apple Store isticmaalaya ID Apple iyo soo bixi software ah
Download.com waa goob caan ah oo bixiya noocyada kala duwan ee software. Waxaad kaloo ka eegi dib u eegista ka hor waxaad kala soo bixi software ah.
Rakibaadda waa mid aad aad u leedahay in la sameeyo waxa la tago ilaha kor ku xusan oo dhan, ka soo dejisan faylka eedeysanuhu, oo la furo. Just maraan habka rakibo, oo waa u fududahay in ay raacaan. Waxaad ordi karaan software ah marka la geliyo.
VLC video ciyaaryahan ee macruufka si lama filaan ah ayaa codka lahayn, sida loo xaliyo?
Tani waa mid ka mid ah dhibaatada ugu badan ee isticmaala badan kala kulmaan marka aad isticmaalayso VLC laakiin waxa ay si fudud u xallin karo. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad wax ka qaban saabsan VLC fadlan hubi haddii dhawaaqa sayidkiisa of your computer ama qalab ku saabsan yahay.
Haddaba tag in Tool oo gaadmada ah oo furan. Guji Audio iyo in la hubiyo ikhtiyaarka loo sahlo audio waxaa laga. Tag qaybta Output iyo dooran hab Output si Automatic ah. Tanu hadda soo celin doonaa codka aad VLC.
Ku dar Video Faylal ay si VLC ee macruufka la Wi-Fi Uploads
Doorashada Wi-Fi Upload u ogolaataa user ay u wirelessly geliyaan videos in macruufka qalabka ay la isticmaalayo browser Web ah ka computer on shabakad isku Wi-Fi. Tani waxay ka badan haboon in aad wareejiso video s. Waa kuwan tallaabooyinku.
1. Hubi in labada your computer iyo aaladaha waa shabakad isku Wi-Fi.
2. Open VLC app, ka dibna garaac VLC icon dusheeda oo taga si Wi-Fi geliyaan si ay u hubiyaan doorasho ku saabsan yahay.
3. Hadda, geli Ciwaanka IP: ga iyo lambarka dekedda leh ee server VLC socda ku saabsan qalabka macruufka iyo cinwaanka internetka ee aad kombiyuutarka. Hadda riix kaliya ee files Upload ama jiita iyo hoos u faylasha aad.
Marka Upload la dhammeeyo, waxaad ka arki kartaa faylasha uploaded on your VLC videos.
Tani waa mid ka mid ah hababka ugu fudud in uu ordo VLC ku saabsan qalabka macruufka. Waxa kale oo aad eegi kartaa ciyaartoyda warbaahinta kale oo ka ciyaari kara diyaariyeen ah ee qaabab file kala duwan oo xitaa ka mid ah oo dheeraad ah.
Top 5 dhibcood la yaab leh kor ciyaaryahan brand-cusub music inankeeda
Sida loo kala iibsiga xogta ka Sony in macruufka
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Android Phones
> Resource > macruufka > Talooyin isticmaalka VLC on Your System macruufka